အရင်းအမြစ်များ - ဘာတွေလဲ။ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
အရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည် သင်အမြတ်ရနိုင်သည့်အချို့သောပစ္စည်းတစ်ခုထောက်ပံ့ရေး, သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။ သဘာဝ၊ သဘာ ၀၊ သဘာဝ၊ ရေ၊ လေသို့မဟုတ်မြေတို့မှရရှိသောသယံဇာတအရင်းအမြစ်များစွာရှိသည်။ လူ၏လက်ဖြင့်ပေးသောအရင်းအမြစ်များ၊ ဥပမာအားဖြင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးအခြားလိုအပ်ရာများကိုဖြေရှင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုအဓိကထားသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ အသက်တာ၌မတူညီသောအချိန်များတွင်ဖြစ်နိုင်သည် သင်မဖြေရှင်းနိုင်သောသို့မဟုတ်သင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ကိုမသိသောအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ နည်းပညာအသစ်များသည်အိမ်၌ဆိုဖာတစ်ခုတည်းမှအဆုံးမဲ့အရင်းအမြစ်များကိုရယူသုံးစွဲစေသည်။ သို့သော်လူအားလုံးသည်ဤအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေရန်စွမ်းရည်၊ သည်းခံခြင်းသို့မဟုတ်စွမ်းရည်မရှိကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတိုင်းအတွက်တူညီသောရရှိနိုင်သောအခွင့်အရေးမရှိပါ။
အရင်းအမြစ်များကဏ္sectionတွင် သငျသညျသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုတွေ့လိမ့်မည် သင်ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏အသားအရေတွင်မကောင်းမွန်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပြီ၊ သင်အကောင်းဆုံးလုပ်နေသည်မဟုတ်ဟုထင်မြင်မိသည်၊ သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်းဘဝသည်မစီးဆင်းနိုင်သည့်အထိရောက်သွားနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည့်အရင်းအမြစ်များမှတစ်ဆင့်သင်မကျေနပ်သောအရာများဖြင့်သင်၏ဘဝ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက် Self- အကူအညီအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ်။ သင်စာဖတ်လိုပါကဤအမျိုးအစား၏အများပြည်သူကြားအကြံပြုထားသည့်စာအုပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်ဤအကြံပြုချက်ကိုပေးသောအသံကိုသင်ပိုမိုနားထောင်လိုခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရင်းနှီးပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောလူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိရှုပ်ထွေးဆုံးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုများ၊ ။
ဘယ်အချိန်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု (သို့) မမှန်မကန်ရောဂါများသည်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည် လူ ဦး ရေအကြားဤအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပျောက်ဆုံးသွားသောသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ထားသောလမ်းကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူ။ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာများသောအားဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းသည်၎င်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သငျသညျပုံပြင်များကြိုက်လျှင်, သူတို့ကအစစ်အမှန်သို့မဟုတ်မြို့ပြဒဏ္areာရီဖြစ်စေ, ဤ၌ သင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပုံပြင်အချို့ကိုရှာဖွေနိုင်သည်နှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာသင်ဟာအချို့သောရုပ်ပုံများ (သို့) စကားစုများကိုသာမြင်ဖို့လိုတယ်၊ ငါတို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ပါ။ စိတ်ဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အတွက်ပုံရိပ်တစ်ခုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်အဲဒီလိုနှိပ်မိသလိုခံစားရတယ်၊ သင်မနှစ်သက်သောအရာကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းတွင်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်စီတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည် မိမိကိုမိမိအကောင်းဆုံးဗားရှင်းအောင်မြင်ရန်။ သို့သော်ကြီးမားသောခြားနားချက်တစ်ခုမှာလူအချို့က၎င်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသိပြီးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေရန်အရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေကြသည်။ အခြားသူများစွာကမူဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်လေ့ရှိပြီးပုံမှန်ဘ ၀ တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလူကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
ဤကိစ္စများတွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်လမ်းကိုညွှန်ပြရန်သာလိုအပ်သည် ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုစောင့်ဆိုင်းနေလိမ့်မည်။ အပြောင်းအလဲအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုမမြင်တွေ့ရသေးသောသူများအတွက်အပြောင်းအလဲကိုစောင့်နေကြောင်းသိပြီးသားသူများအတွက်ဤကဏ္thisတွင်ဤအရင်းအမြစ်များကိုဖော်ပြထားသည်။ အပြောင်းအလဲလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်လိုက်ပါသွားသည်ဟုခံစားရရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကူညီရန်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်မှုလောကသို့ ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်သောလက်ဖြစ်သည်။
Don Quixote မှ စကားစု ၅၀
Miguel de Cervantes Saavedra ရေးသားခဲ့သည် El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသော ဝတ္ထုဖြစ်ပြီး ... သို့မဟုတ် ...
ရယ်စရာကောင်းသော narcissistic စကားစု 50
တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်တော်တို့ကို မစော်ကားမိစေဖို့အတွက် ရယ်မောခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်...
ရယ်စရာကောင်းသော ပရောပရီစကားများ 60
မင်းက ရယ်စရာစကားတွေကို မတွေးနိုင်လို့ ခဏရပ်ပြီး တွဲချင်နေတယ်ဆိုရင်...
နွေရာသီစာပိုဒ်တို ၅၅ ခု
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ် .
နွေရာသီရောက်ပြီဆိုတော့ အပူဒဏ်၊ ရာသီဥတုကောင်းလို့ အပြင်ထွက်ဖို့ အချိန်ပိုပေးချင်ကြတယ်...
တက္ကသိုလ်မှာ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်မှာ infographic လုပ်ခိုင်းထားပေမယ့် အတိအကျမသိပါဘူး...
ဂုဏ်ယူစရာ စကားစု ၄၂ ခု
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် တစ်ချိန်ချိန်တွင် မာန်မာနကို မသိကြသော်လည်း၊ မာနဆိုတာ စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ရင်...
မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုပုံ- မူရင်းစာပိုဒ်တို ၃၆ စောင်
မွေးနေ့ကို ဆင်နွှဲရခြင်းသည် အမြဲပျော်ရွှင်ရွှင်မြူးစေသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် မှန်ကန်သောစကားလုံးများကို ရှာဖွေပါ...
က​လေး​တွေကို သတ်​မှတ်​ထားတဲ့ ​ခေါင်းစဉ်​​လေးတစ်​ခုကို ပြန်​လည်​​တွေး​ခေါ်ချင်​တဲ့အခါ ​ရှေးဦးစွာ ​လေ့လာသင့်​တယ်​ဆိုတာ သတိရ​နေဖို့ လိုပါတယ်​...
ခြယ်လှယ်တတ်တဲ့လူတွေက သူတို့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့ပုံတစ်ခုပေးတတ်တယ်။ သူတို့က တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်၊ စေ့စေ့စပ်စပ် တွက်ချက်တတ်တယ်၊...
ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် ရေစာ ၄၀
ရေသည် အသက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို တည်ရှိစေသော ဒြပ်စင်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းမရှိလျှင် တည်ရှိနေမည်မဟုတ်ပေ၊ သို့မဟုတ်...
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
ဘဝရဲ့ဆိုရိုးစကားတွေကငါတို့နဲ့အမြဲလိုက်ဖက်ဆုံးဘဲ၊ အကောင်းဆုံးတွေကသူတို့အကြောင်းအများကြီးပိုပြောပြတာဘဲ ...
Renaissance ၏ 15 အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်စာပေအကျင့်ကိုကျင့်
romanticism ၏ 28 အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်စာရေးဆရာများ
Lactic fermentation ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုထုတ်လုပ်သလဲ။
လူမှုဖြစ်စဉ်များ - ဘာလဲ၊ အမျိုးအစားများနှင့်လက္ခဏာများ
ဓာတုဗေဒပြောင်းလဲမှုများဘာလဲ ဝိသေသလက္ခဏာများ, ညွှန်းကိန်းများနှင့်ဥပမာ
chemosynthetic သီအိုရီကဘာလဲ? အခြေခံနှင့်စမ်းသပ်မှု
အရည်အသွေးချဉ်းကပ်မှုကဘာလဲ? မူလအစ, ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းစနစ်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိဒါန်းစာသား ၁၀ မျိုးကိုပြသသည်
Discursive နှင့် prosodic အရင်းအမြစ်များ, သူတို့ကဘာတွေလဲနှင့်၎င်းတို့၏အမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်